Hem / Xaqaaga iskoolka	/ Waxaad xaq u leedahay in aad ogaato waxa lagaaga baahanyahay si aad u hesho shahaadooyinka qaar
Mararka qaar way adagtahay sida aad u fahanto sababta aad u heshay shahaadadaas. Waxaad dareemi kartaa cadaalad darro. Laakiin marwalba waxaad xaq u leedahay in aad ugaato sababta shahaadadaas laguu siiyay.
Macallinku waa in uu sheegaa shuruudaha shahaadooyinka
Maaddo kastaa waxay leedahay manhaj qorsheeysan uu macalinku raacayo. Manhajkaa wuxuu dhigayaa ujeedada maaddada iyo natiijooginka laga rabo maaddadaa, taa waxaa loola jeedaa waxa adiga arday ahaan lagaa rabo marki aad maadadaa aqrisato. Maadda kastaa waxay leedahay liis ku qoran aqonta laga rabo ardayga si markaa uu u helo shahaadada u qalmata aqoontiisa. Marka ugu horaysaba oo aad bilaawdo maaddo waa in uu macalinka si faahfaahsan uu u sharraxaa natiijada ardayga laga rabo iyo waxa kale si uu u buuxiyo shuruudaha aqoontiisa.
Waxaad xaq u leedahay in aad ogaato sida uu macalinka u qiimeeyay wax qabadkaaga. Qiimeynta waxay ahaan kartaa wax ka baxsan aqoonta maaddada. Markasta waxaad kala hadli kartaa arintaas macalinkaaga. Ugu yaraan sanad dugsiyeedkiiba hal mar waa in aad heshaa warbixin iyo wada hadal ku saabsan maaddooyinka laguu dhigi doono.
Maka dacwoon karaa shahaado?
May, kama dacwoon kartid. Laakiin waxaad xaq u leedahay in laguu sharaxo sababta aad u heshay shahaadadaa. Shahaado lagama dacwoon karo saas darteed waa in ay kormeerayaasha iskoolka baaraan inta ay dacwo gaarin hadii uu markaa shahaado qaldan ku siiyay macalinka.
Hadii ay dhacdo in shahaado qaldanto tusaale ahaan qalad loo qoro waxaa fiirinaya qaladkaa maamulaha oo saxayana. Laakiin intaa wixi dhaafsiisan xaq uma lahan maamulaha in wax kabadalo shahaadadi uu macalinka bixiyay. Sidaas darteed waa muhiim in aad macalinkaaga la hadasho inta aan shahaadada lasixin hadii aad ka walwalsantahay wax qabadkaaga. Taa xaq ayaad u leedahay.
Kor ma u qaadi karaa shahaado?
Haa, dugsiga hoose dhexe markasta waad isku dayi kartaa in aad shahaadadaada kor u qaado, adiga oo xataa ku baasay ayaa waliba dhibcaha sii kordhisan kartaa. Laakiin dugsiga sare waxaad kor u qaadi kartaa shahaadadaa marka aad ku dhacdo oo kaliya ama aanad wax shahaada ahba aanad helin. Markaa imtaxaan oo maadadii oo dhan ah waa in aad samayso. Imtaxaanka marka ma ahan in uu qofka casharo dheeraad ah uun in uu sameeyo. La hadal maamulahaaga sida uu imtaxaankaa noqon doono.